घरायसी कामको महत्त्व | पहिलो बोली
२२२१ पटक पढिएको
Published on: Wednesday May 6, 2020 (2 years ago)
केही परिवारमा छोराछोरीले घरायसी काममा सघाएको आशा गरिन्छ र छोराछोरी पनि त्यसो गर्न खुसी हुन्छन्‌। तर अरू कतिपय परिवारमा भने छोराछोरीबाट त्यस्तो मदतको आशा गरिंदैन र छोराछोरी पनि काम गर्न अग्रसर हुँदैनन्‌।
विशेषगरि पश्‍चिमी मुलुकका छोराछोरी परिवारलाई केही दिनेभन्दा परिवारबाट केही पाउने आशा राख्छन्‌ भनेर अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्‌। स्टिभन नाम गरेका एक बुबा यसो भन्छन्‌, “आजभोलि छोराछोरीले भिडियो गेम खेल्न, इन्टरनेट चलाउन र टिभी हेर्न जति समय बिताए पनि तिनीहरूलाई कुनै रोकटोक लगाइँदैन, तिनीहरूबाट निकै कम आशा गरिन्छ।”
तपाईंको विचार कस्तो छ? घरको काममा सघाउ पुऱ्याउन मात्र नभई छोराछोरीको आफ्नै हितको लागि पनि उनीहरूलाई घरायसी काम अह्राउनु के साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ ।
केही आमाबुबा आफ्नो छोराछोरी हप्ताभरि होमवर्क र स्कुलपछिको अतिरिक्त क्रियाकलापमा व्यस्त हुने भएकोले उनीहरूलाई काम अह्राउँदैनन्‌। तर छोराछोरीलाई काम अह्राउँदा कस्ता फाइदा हुन्छन्‌ विचार गरौं।
यसले छोराछोरीलाई परिपक्व हुन मदत गर्छ। घरको कामकाजमा मदत गर्ने छोराछोरी स्कुलमा पनि सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। घरको विभिन्न काममा मदत गर्दा यसले छोराछोरीमा आत्मविश्वास, अनुशासन र दृढता विकास गराउँछ। कुनै कुरा सिक्न यी गुणहरू हुनैपर्छ।
यसले छोराछोरीमा सेवा गर्ने मनोभाव बढाउँछ। घरको कामकाजमा मदत गर्ने गरेका छोराछोरी ठूलो भएपछि सामाजिक काममा पनि भाग लिने गरेको केहीले याद गरेका छन्‌। घरको कामकाजले उनीहरूलाई आफ्नो भन्दा अरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिन मदत गर्छ। अर्कोतर्फ, अगाडि चर्चा गरिएका स्टिभन यसो भन्छन्‌: “छोराछोरीलाई कुनै काम दिएन भने उनीहरू अरूबाट सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्छन्‌ अनि हुर्किसकेपछि पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न र मेहनत गर्न सिक्दैनन्‌।”
यसले पारिवारिक एकता बढाउँछ। घरको विभिन्न कामकाजमा मदत गर्दा छोराछोरीले आफू परिवारको एक बहुमूल्य सदस्य मात्र नभई परिवारप्रति जिम्मेवार भएको महसुस गर्छन्‌। आमाबुबाले घरको कामलाई भन्दा छोराछोरीको स्कुलपछिका अतिरिक्त क्रियाकलापलाई महत्त्व दिए भने छोराछोरीले कहिल्यै यस्तो पाठ सिक्न सक्दैनन्‌। आफैलाई सोध्नुहोस्, ‘यदि मेरा छोराछोरी त्यस्ता क्रियाकलापमा बढी समय बिताउँछन्‌ तर परिवारसँग भने नजिक छैनन्‌ भने के नै फाइदा भयो र?’
सानैदेखि सुरु गर्नुहोस्। केहीले छोराछोरी तीन वर्षको हुँदादेखि आमाबुबाले काम सिकाउनुपर्छ भन्छन्‌। अरू भने छोराछोरीलाई दुई वर्ष वा त्योभन्दा पनि सानो उमेरदेखि नै काम सिकाउन सल्लाह दिन्छन्‌। हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको साना केटाकेटीलाई आफ्नो आमाबुबासँगै काम गर्न र तिनीहरूको नक्कल गर्न मन पर्छ।
उमेर सुहाउँदो काम दिनुहोस्। उदाहरणको लागि, तीन वर्षका छोराछोरीले खेलौना टिपेर राख्ने, आफूले पोखेको सानोतिनो कुराहरू सफा गर्नेजस्ता काम गर्न सक्छन्‌। अलि हुर्किएका छोराछोरीले चाहिं कुचो लगाउन, आफ्नो लुगा धुन अनि खाना पकाउन सक्छन्‌। छोराछोरीको क्षमता राम्ररी विचार गर्नुहोस्। छोराछोरीले उत्सुकतासाथ घरको काम गरेको देख्दा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ।
घरको कामलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। छोराछोरीको होमवर्क धेरै हुँदा यसो गर्न गाह्रो हुन सक्छ। पढाइ राम्रो होस् भनेर छोराछोरीलाई घरको काम नलगाउनु “प्राथमिकता राम्रोसँग छुट्‌याउन नसक्नुको सङ्‌केत हो” । पहिला पनि चर्चा गरिएझैं घरको काम सघाउँदा यसले छोराछोरीलाई अझ राम्रो विद्यार्थी बन्न मदत गर्छ। अनि यस्ता कुराहरूले उनीहरूलाई भविष्यमा आफ्नो परिवार सम्हाल्न तयार बनाउँछ।
परिणामलाई भन्दा उद्देश्यलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईंले दिनुभएको काम गर्न छोराछोरीलाई तपाईंले सोचेको भन्दा लामो समय लाग्न सक्छ। काम त्यत्ति गुणस्तरीय नहुन सक्छ। त्यसोभए तापनि छोराछोरीलाई सुम्पिएको काम आफैले गरिदिने नगर्नुहोस्। तपाईंको उद्देश्य छोराछोरीले ठूलो व्यक्तिले जस्तै राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने होइन, उनीहरूलाई जिम्मेवार व्यक्ति हुन र कामबाट आनन्द उठाउन सिकाउनु हो।
इनाम दिनुहोस्। छोराछोरीलाई घरको काम गरेबापत पैसा दिंदा उनीहरूले जिम्मेवार हुन सिक्छन्‌ भनेर कोही-कोही बताउँछन्‌। अरू भने त्यसले छोराछोरीलाई परिवारलाई केही दिनेभन्दा परिवारबाट केही पाउने कुरामा मात्र ध्यान दिने बनाउँछ भनेर टिप्पणी गर्छन्‌। यदि छोराछोरीसँग पैसा छ भने उनीहरूले काम गर्न इन्कार गर्न सक्छन्‌ भनेर पनि चेतावनी दिन्छन्‌। यसो हुनु भनेको छोराछोरीलाई काम लगाउनुको उद्देश्य पूरा नहुनु हो। हाम्रो लागि पाठ? छोराछोरीलाई पैसा दिंद घरको काम गरेबापत दिएको तलब जस्तो गरी नदिनुहोस्।